Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain Nacho Fernandez Storyhood Story Sheekooyinka dhabta ah ee aan la sheegin
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Defensive Genius kaasoo si fiican u yaqaan naaneyska; "One Club Man". Nacho Fernandez Childhood Story Story iyo Waxyaabaha Aan Laheyn Xaqiiqada Aaladda waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo xaqiiqooyin badan oo OFF-Pitch xaqiiqda aan yareyn ee ku saabsan isaga.
Haa, qof waliba wuu ogyahay in uu qarxay qarxinta qarxinta 2018 Koobka Adduunka ee dalkiisa. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal yar oo kaliya ayaa ka ogaanaya Nacho's Bio oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Nacho Fernandez Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Nolosha Hore
José Ignacio Fernández Iglesias wuxuu ku dhashay maalinta 18th ee Janaayo 1990 ee magaalada Madrid, Spain. Waxa uu ku dhashay hooyadiis, Maite Iglesias iyo aabihii, José María Fernández Nacho labada waalid ee jecel (sawirka hoose) waxay ka soo jeedaan Madrid Spain.
Sheeko caruureedka Nacho Fernandez waa mid xiiso leh, haddii aan caadi ahayn - taas oo ka mid ah nolosha carruurnimada imtixaanka oo ku faantay magac caan ah.
Nacho wuxuu dhashay cunuggii ugu horeeyay ee ubadkiisa iyo wiilkiisa. Waxa uu ku koray laba ka mid ah walaalihiis oo ah Alex iyo Maite Fernández, oo magac leh oo magaceeda la mid ah.
Ilmo ahaan, Nacho wuxuu lahaa shakhsi shakhsi ah oo xasilloon. Dhinaca kale, waxa laga yaabaa in uu go'aan ka gaaro oo uu niyadjab ku noqdo raadsigiisa aqoontiisa iyo inuu la qabsado qiyamka asluubeed ee uu baray waalidkiis. Daryeelka wanaagsan ee walaalihiis wuxuu muujinayaa sifo kale oo Nakho leh inta lagu jiro maalmaha caruurnimada.
Iyadoo Real Madrid ay udhowdahay gurigeeda ayaa abuurtay qaab ciyaareedkan kubadda cagta ee kubada cagta ee waalidka Nacho. Labada waalidba waxay ku booriyeen wiilashooda inay horumariyaan muuqaalka dabiiciga ah ee kubadda cagta.
Nacho iyo Alex oo u sharaxan kubada cagta ayaa arkay iyaga oo iska diiwaan galinaya koox ka mid ah koox dhalinyaro ah, AD Complaint. Kooxdani waxay siisay Nacho iyo Alex si ay u muujiyaan awooda ay u leeyihiin. Sawirada ugu weyn ee wiilasha waxay ahayd inay ku guuleystaan ​​isdiiwaangelinta akadeemiyadda Real Madrid.
Nacho Fernandez Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Kusoo caan bax
Ka dib markii dhowr sano ay ku jirtay AD Complutense, Nacho wuxuu noqday diyaar u ah tartanka weyn. Iyadoo lagu dhiirigelinayo waalidiintiisa, ayaa go'aansaday in ay tagaan maxkamadeynta Real Madrid Academy. Nacho ayaa timid Real Madridnidaamka dhalinyarada ee da'da 11.
Just ka dib hal sano oo uu joogay akadeemiyadda, dhakhaatiirtu waxay u sheegeen inuu ahaa sonkor. Waqtigan xaadirka ah ayaa Nacho la halgamay qaybta ugu muhiimsan ee caruurnimadiisa. Marka hore, waxaa lagula taliyay in la go'aamiyo, iyada oo aan loo oggolaan in cudurku u saameynayo si xun. Ka dhigitaanka ballanqaadka akadeemiyadda kubada cagta ayaa ah inay adag tahay Nacho si uu u eego shaqadiisa kadibna uu maamulo caafimaadkiisa dhinaca kale. Kii ugu horreeyey waa in la udhigmeeyo tan kale. In uu erayadiisa;
Waxaan xasuustaa tegitaanka isbitaalka - waxaan u maleynayay inaan u gudubnay tartan Real Madrid, lakiin waa inaan seegi lahaa - waxaana arkay dhakhtar, ma ahan dhakhtarka xammuulka. Waxay ii sheegtey maalmaha kubada cagta in ay dhammaatay.
Waxaan lahaa waqti aad u adag oo ah dhammaadka usbuuca. Seddex maalmood ka dib waxaan arkay Dr Ramírez, oo noqda noqoshadaydii ugu dambaysay ee dhakhtarkayga ku shaqeeya, oo aan aad u jeclaa. Waxa uu ii sheegay inaan ka soo horjeedo: ma jirto wax kubada cagta ah aniga ahaan. Xaqiiqdii, waxa muhiim ahaa inaan sii wado ciyaarka sababta oo ah jimicsiga jirka waa mid aad muhiim u ah. Isniintii, noloshayda ayaa mar kale bilaabay.
Nacho oo taageero ka heley kooxdiisii ​​ayaa xannaaneyntiisii ​​sii waday raashinka iyo sida uu u nastay. Marka laga reebo in nafsad ahaantiisa caafimaad loo helo, Nacho waa inuu qaadaa qalabkiisa caafimaad sida Daawooyinka sonkorowga, Taleefanka gacanta, Cunnooyinka gargaarka degdegga ah, xirmada gargaarka degdega ah, insulin, kormeer, dhalada biyaha iwm.
Waxaa jiray noocyo cunto ah oo uu ka taxadarey. Nacho wuxuu nasiib u yeeshay sida macaankiisa uu ku dhacay. Intaa ka badan, waxa uu si wanaagsan ula qabsaday dhakhtarkiisa, wuxuu sii waday xirfaddiisa isagoo aan cabsaneynin islamarkaana koray kooxda kubadda cagta ee dhalinyarada.
2 September 2012, oo ah maamulaha kooxda José Mourinho ayaa ku dhawaaqay in Nacho, oo ay la socoto Álvaro Morata iyo Jesús, ayaa loo dallacsiin doonaa kooxda koowaad laakiin waxay sii wadaan inay la ciyaaraan Castilla. Isaga iyo walaalkiis ayaa ka soo qalinjabiyay akadeemiyadda Real Madrid, labaduba waxay sameeyeen kulankiisii ​​ugu horeeyay ee isla hal kulan. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Nacho Fernandez Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Nolosha Xiriirka
Kubadda cagta waa geed dahab ah, meel Nakho ah oo ku taal xayawaan iyo xajin ayadoo la dhibtoonayo Diabetics. In kale si ay u dhisaan sawir dhamaystiran oo noloshiisa ah, Jacaylku wuxuu sidoo kale muhiim u ahaa Nacho. Taasna wuxuu ku arkay Maria Cortes Milan oo ku dhashay 13 Febraayo 1989 (hal sano oo ka wayn ninkeeda).
Nacho iyo Maria waxay ku kulmeen dugsigeeda intii uu sanado yar ku jiray akadeemiyadda Real Madrid. Maria waxay si fiican u baratay shahaadada Suuq-geynta iyo Isgaadhsiinta. Nacho iyo Maria ayaa guursaday 2014 kaniisada Iglesia de la Asunción ee Meco (Madrid).
Nacho ka dib markii uu guursaday Maria ayaa ku barakeeyey laba caruur ah oo qurux badan sida ay ku arkaan sawiradooda farxadda qoyska ee hoos ku qoran.
Nacho mar uu cadeeyay inuu yahay nin ka tirsan qoyska markuu yiri; "Xitaa haddii aanan ciyaareynin, caadi ahaan waxaan ahay qof deggan." ayuu ku daray. "Waxaan jeclahay in aan wax badan kala hadlo qoyskeyga." Hoos waxaa ku qoran qoyska oo u dabaaldegaya halyaygooda iyo qaabka jilitaanka maalinta dhalashadiisa.
Nacho Fernandez Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Nolosha Qoyska
Waalidiinta Nakho; José María Fernández iyo Maite Kaniisadaha waxay ahaayeen laba qof oo aasaasi ah Nacho's Xirfadda ciyaaraha. The Real Madrid Kubad sameeyaha wuxuu ku jiraa naadiga cad ee sanadka 15 waxaana ugu mahadcelinayaa qeyb weyn oo maskaxda ah in waalidiintiisa ay awood u yeesheen in ay ilmo ahaan u yeeshaan. Markaa kadib, waalidkiis waxay had iyo jeer u sheegi lahaayeen;
Wiil, fadlan ku raaxeyso daqiiqad kasta oo la xiro shaati cad oo u shaqee si aad u gaarto hadafyadaada.
Nacho isaga qudhiisa ayaa qirtay marar badan.
"Mar kasta oo aan guriga tago, waalidkaygu wuxuu ii sheegay in 'u malaynayo meesha aad ka socoto oo aad ka faa'iidaysato, sababtoo ah ma ogid markii uu dhammaado"
Waalidiintiisa; Jose María iyo Maite waxay ka warqabaan dhibaatada ku lug leh oo kaliya ma ciyaarista Real Madrid laakiin waxay joogaan sanado badan. Labadaba waxay taageereen wiilkooda jecel xitaa marka aad aragto waqti yar ee ciyaarta ee kooxda.
Caqli-gelintaas oo sabir u ah mid ka mid ah naadiyada aan fiicnayn Alex (Nacho walaalkiis ka yar) oo ka dib markii uu kulankiisii ​​ugu horeysay u ciyaaray Real Madrid, ayaa ku soo laabtay noloshiisa Bernabéu.
Álex ayaa ka tagay Real Madrid bishii August 2013, iyadoo ogolaansho iskaashi ah. Wuxu saxiixay wax yar ka dib RCD Espanyol heerkii ugu sarreeyay ee uu ka ciyaarayay kooxdiisii ​​hore.
Laga soo bilaabo 2015 ilaa 2017, Alex wuxuu u ciyaaray afar kooxood; Rijeka, Akhriska, Elche iyo Cádiz.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Nacho Fernandez Childhood story iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!